के अमेरिकामा भएको ‘सेप्टेम्बर ११’ आक्रमणमा निर्दोष थिए त लादेन ? -
के अमेरिकामा भएको ‘सेप्टेम्बर ११’ आक्रमणमा निर्दोष थिए त लादेन ?
अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिसकेको तालिबानले अल कायदाका पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेनको २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी आक्रमणमा संलग्नता नभएको दावी गरेको छ । तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदका अनुसार २००१ मा जब अमेरिकामा आक्रमण भयो त्यतिबेला लादेन अफगानिस्तानमा थिए । उनी यो आक्रमणमा संलग्न थिएनन् ।
फिफा वरीयतामा नेपाल यथावत, टप फाइभमा बेल्जियमदेखि इटालीसम्म
by Mangal ३ दिन अघि
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपालको स्थान यथावत रहेको छ
एलन मस्कले रचे नयाँ इतिहास
विश्वका सर्वाधिक धनाढ्य एलन मस्कको एरोस्पेस कम्पनी स्पेसएक्सले चार सर्वसाधरणलाई अन्तरिक्ष पठाएर अन्तरिक्ष विज्ञानको